Inoveli I- "180º North East" ukulandisa kwamagama angama-90,000. Ikhuluma ngendaba eyiqiniso yohambo uDaniel Kutcher alwenza e-Australia, e-Asia, eCanada naseScandinavia ekwindla ka-2009 lapho eneminyaka engama-24. Kuhlanganiswe ngaphakathi komzimba oyinhloko wombhalo ositshela indaba yalokho abephila ngakho futhi wakufunda phakathi nohambo , izithombe, amamephu, umbhalo ocacile nevidiyo kusiza ukufaka umfundi esifundweni futhi anikeze umuzwa ongcono wokuzibona komuntu siqu.
Design Yemidlalo Yaseshashalazini
Design Yemidlalo Yaseshashalazini Isikhumbuzo semali ecatshangelwe ngesizathu nomphumela, okusiholela ezenzweni, ebesingacabangi ukuthi kungenzeka. Ngokubeka izithameli etafuleni eliyindilinga, njengenkundla yase-Europe, bengifuna ukudala igumbi lapho izethameli zibandakanya, zixhumana futhi zikhombise ngengxenye yazo ngokuqhubeka kwemicimbi.
Ukuhlalisa Izihlalo Kubagibeli Bokuhamba
Ukuhlalisa Izihlalo Kubagibeli Bokuhamba IDoor Stops ukusebenzisana phakathi kwabaklami, abaculi, abagibeli kanye nabahlali bomphakathi ukugcwalisa izikhala zomphakathi ezinganakwa, njengezindawo zokuhamba nezindawo ezingenabantu, ngamathuba okuhlala ukuze kwenziwe idolobha libe indawo emnandi kakhulu ukuba lapho. Idizayinelwe ukuhlinzeka ngenye indlela ephephe nejabulisayo ngobuhle kulokho okukhona njengamanje, amayunithi afakwa ngombukiso omkhulu wobuciko bomphakathi othunyelwe kusuka kubadwebi bendawo, okwenza indawo ebonakalayo elula, ephephe nenhle yokulinda abagibeli.
Ukwakheka Kwekhanda Nomqondo
Ukwakheka Kwekhanda Nomqondo IMIPHAKATHI yokuthola imiphumela ihlangane nenhlangano phakathi kwenwele elungisa izinwele - i-Gijo, neqembu labakhi bezakhiwo - FAHR 021.3. Bashukunyiswa yi-European Capital of Culture eGuimaraes 2012, bahlongoza umbono wokuhlanganisa izindlela ezimbili zokudala, i-Architecture & Hairstyle. Ngomxholo wokwakhiwa kwesihluku owenziwe ngomphumela umphumela wokumiswa kwekhanda elisha lokubonisa ukuguqulwa isimo ngobunye ngokuphelele enezakhiwo zezakhiwo. Imiphumela eyethuliwe ingumbhalo ogqamile nohlolayo nencazelo enamandla yesimanje. Ukusebenza ngokubambisana nekhono kwakubalulekile ukwenza izinwele zibonakale njengejwayelekile.
Ikhalenda Njalo ngonyaka uNissan ukhiqiza ikhalenda ngaphansi kwengqikithi ye-brandlineline yayo ethi "Inkululeko ngokungafani nenye". Uhlobo lonyaka ka-2013 lugcwele imibono kanye nemifanekiso eyingqayizivele njengoba kusebenzisana nomdwebi openda umdanso i- “SAORI KANDA”. Zonke izithombe ezikukhalenda ziyimisebenzi yeSAORI KANDA umculi wokudweba umdwebo. Ubuye waveza ugqozi alunikezwe yimoto kaNissan kwimidwebo yakhe edwetshwe ngqo kwikhethini elivundlile elibekwe studio.
Calendar 2014 “Botanical Life” Ikhalenda Mgqibelo 12 Juni
Calendar 2014 “Farm” Ikhalenda Lwesihlanu 11 Juni
Calendar 2014 “Town” Ikhalenda Lwesine 10 Juni
Inoveli Isithombe Design Yemidlalo Yaseshashalazini Ukuhlalisa Izihlalo Kubagibeli Bokuhamba Ukwakheka Kwekhanda Nomqondo Ikhalenda